Gudigii loo xilsaaray inay soo baaraan xasuuqii AMISOM ay ka geysteen Shabeelaha Hoose oo warbixin soo saaray | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Saturday, May 25th, 2013	Home
Gudigii loo xilsaaray inay soo baaraan xasuuqii AMISOM ay ka geysteen Shabeelaha Hoose oo warbixin soo saaray
Published on February 12, 2013 by abdi maanka · No Comments
Number of View :1204Iyadoo Bishii hore ay Ciidamada AMISOM xasuuq u geysteen Shacabka ku nool Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa hada loo sameeyay qiil ah inaysan geysan wax xasuuq ah.
Gudi ka kooban Saraakiisha Dowlada Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM ayaa loo saaray inay soo baaraan xasuuqii ay ciidamada AMISOM ka geysteen deegaanka Luuq Jeelow oo hoos yimaada deegaanka Leeego ee Gobolka Shabeelaha Hoose, iyadoo ciidamada Midowga Afrika lagu eedeeyay inay xasuuqeen dad Rayid ah.
Xasuuqaan oo ka dhacay Deegaanka Luuq Jeelow ayaa dhacday 14 ka Bishii Janaayo ee sanadkan aan ku jirno ayay Gudigan shaqo bilaabeen, waxaana keenay in la baaro kadib marki ay Shacabka sheegeen in si bareer ah ay ciidamada u xasuuqeen Caruud yar yar iyo Haween Uur leh.
Warbixin ay ku qancin Umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwii dadka laga xasuuqay ayaa ka soo baxday Gudiga loo xil saaray inay soo baaraan dhacdadaasi,w axaana ay soo saareen in Ciidamada AMISOM ay ilaaliyen shuruucda caalamka u degsan furuumaha ay ka dhacaan dagaalada u dhexeeyay Alshabaab iyo Cidamada AMISOM.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Ciidamada AMISOM xili ay ku sugnaayeen Fariisimaha ay ku leeyihiin Deegaanka Leego ay soo weerareen Xoogag ka tirsan Alshabaab.
Ciidamada AMISOM oo qiil loo raadinayo ayaa la sheegay inay iska caabintaasi ay ku geeriyoodeen dadka shacabka ah, balse aysan AMISOM xasuuq bareer ah u geysan Shacabka ku nool Gobolkaasi.
Andrew Gutti oo ah Taliyaha ugu sareeya AMSOM ayaa isna eeda dhibaatadaasi dusha kaga tuuray Alshabaab, isagoo ku eedeeyay inay markasta dhibaato u horseedaan dadka shacabka ah ee ay ku dhex gabanayaan.
Si kastaba ha ahaateen Xasuuqii ay geysteen Ciidamada AMISOM ayaa qiilkaasi loo sameeyay, waxaana ay Dadkii dhacdada joogay ay sheegeen in ciidamada ay si bareer ah u Toogteen dad ka badan 8 Ruux, kuwaasoo ay ku jireen Caruur dhiganeysay Dugsi Quraan ku yaala Deegaanka ay musiibadu ka dhacday.